Free Burma Rangers (2020) – Gold Channel Movies
A Family Brings Hope To The Front LinesFeb. 24, 2020USA105 Min.Not Rated
ဒီနာမည်ကိုအရင်က မကြားဖူးခဲ့ရင်တောင် အခုကာလမှာ ကြားဖူးနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာမဟုတ်ဘဲ Free Burma Rangers (FBR) အဖွဲ့နဲ့ တည်ထောင်သူ David Eubank အကြောင်းကို Documentary အဖြစ် ဖန်တီးတင်ဆက်ထားတာပါ။
အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ David Eubank ဟာ သူ့ဖခင်ဆီကတဆင့် အကူအညီလှမ်းတောင်းတဲ့ ဗမာ (မြန်မာ)ပြည်က တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကြောင့် နယ်စပ်က စစ်ဖြစ်ရာနေရာတွေဆီ သွားရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ အဲဒီခရီးမှာ တိုင်းရင်းသားဆရာ၀န်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံမိပါတယ်။ သူတို့ဟာ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရနေသူတွေကို ကုစားပေးရာကစလို့ တဖြည်းဖြည်း အဖွဲ့၀င်‌တိုးပွားလာပြီး FBR စတင်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
FBR ဟာ တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့မဟုတ်ဘဲ ဗမာ၊ ဆူဒန်နဲ့ အီရတ်နိုင်ငံတွေက စစ်ဖြစ်ရာနေရာတွေမှာ ဆေးအကူအညီပေးခြင်း၊ ကင်းထောက်ပေးခြင်း၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပေးခြင်း၊ သတင်းမှန်ကို သက်သေနဲ့တကွ စွန့်စားရယူပြီး UN နဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းအေဂျင်စီများထံ ပေးပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများစွာကိုလည်း ရှေ့တန်းဆေးကုသရေးအဖွဲ့တွေအဖြစ် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Eubank နဲ့သူ့မိသားစုဟာ သူ့နိုင်ငံမှာ မိသားစုအေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်နိုင်ပေမဲ့ စွန့်စားမှုတွေများလှတဲ့ ကူညီကယ်‌ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
Documentary ဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့စွန့်စားမှုတွေ၊ စစ်ဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ သနားစရာ၊ ထိတ်လန့်စရာဘ၀တွေကို လက်တွေ့မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် စိတ်၀င်စားစရာကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Translated and Review by Cherry, DB Kun & Maymie Kyaw
Run Time – 1 Hr 45 mins
IMDb Rating 7.8 187 votes
Download Mediafire SD Myanmar 370MB
Download G Drive SD Myanmar 370MB
NovemberApril 5, 2021Reply
thanks good family !
Chyeju laApril 2, 2021Reply
MeeMeeMarch 13, 2021Reply
The Bible ဆိုတဲ့ Mini series လေးတင်ပေးပါလား Admin ရယ် အဲ့series လေးတင်ပေးပါနော် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်